Which Delivery is Best for Delivery during COVID?
Aung Myo Hein 16 Oct, 2020
ကိုဗစ်ကာလအတွင်းမှာ ဆိုပေမယ့် Online Shopping သမားတွေပဲဖြစ်ဖြစ် အရေးကြီးလို့ တစ်နေရာကတစ်နေရာ ၊ တစ်မြို့ကနေတစ်မြို့ ပစ္စည်းတစ်ခုခု ပို့ရတော့မယ့်အခါ စိတ်လည်းချရ၊ ဝန်ဆောင်မှုလည်းကောင်းတဲ့ Delivery တွေကို သင်သိပြီးပြီလား?
မသိရင်တော့ အောက်က Delivery တွေကိုမှတ်ထားဖို့ လိုနေပြီနော်…
လက်ရှိ မြို့နယ်ပေါင်း (၁၆၅) မြို့နယ်မှာ ရုံးခွဲတွေ ဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Delivery Service တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ MGL App ဆိုတဲ့ ကိုယ်ပိုင် App လည်းရှိထားပြီးတော့ ကိုယ်ပို့လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေ ရောက်မရောက်၊ အဆင်ပြေမပြေ ဆိုတာတွေကို အဆိုပါ App ကနေ ကြည့်ရှုနိုင်မှာပါ။ ပို့လိုက်တဲ့ ပစ္စည်းတွေအတွက် အထူးအစီအစဥ် Special Warranty တွေလည်းရှိတဲ့အပြင် ကမ္ဘာ့နိုင်ငံပေါင်း (၁၀၀) ကျော်ကိုလည်း ပို့ဆောင်နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
Page Link > https://bit.ly/318W6uX
နောက်ပိုင်းမှာ အသုံးများလာတဲ့ Delivery Service တစ်ခုဖြစ်ပြီး မြို့ပေါင်း(၁၀၀) ကျော်ကို ပို့ဆောင်ပေးနိုင်မှာပါ။ မပို့ခင် ကိုယ်ပို့ချင်တဲ့ ပစ္စည်းပို့ခ ဘယ်လောက်ကျမလဲ ဆိုတာကိုပါ ကြိုတင်တွက်ချက်နိုင်မှာဖြစ်ပြီး Website ကနေတစ်ဆင့်လည်း မိမိပစ္စည်း ရောက်မရောက် စစ်ဆေးနိုင်မှာပါ။
Page Link > https://bit.ly/3dtdjEA
U2 Delivery Service
ဒီ Service ကတော့ ရန်ကုန်၊မန္တလေး၊လားရှိုး၊ပဲခူး၊သန်လျင်တ စတဲ့မြို့ကြီးတွေကို ပို့ဆောင်ပေးပါတယ်။အိမ်ကိုလာယူရာမှာ အခမဲ့ဖြစ်တာမို့လို ပိုပြီးတော့လည်း အဆင်ပြေစေပါတယ်။ ရန်ကုန်မြို့တွင်း (၂၁) မြို့နယ်ကိုဆို (၁၅၀၀) ကျပ်သာကျသင့်မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Online Shop ပိုင်ရှင်တွေအတွက် ပစ္စည်းတွေစိတ်ချရအောင် ကတ္တူပုံး၊ ရေစိုခံအိတ်၊ Bubble Bag ၊ တိပ်၊ စတစ်ကာ အစရှိတာတွေနဲ့ စနစ်တကျ အခမဲ့ ထုပ်ပိုးမှုတွေလည်း လုပ်ပေးပါသေးတယ်တဲ့နော်။
Page Link > https://bit.ly/3jZ3KzA
Shield Express Delivery
မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးကို အိမ်အရောက် ပို့ဆောင်နိုင်ပြီး ရန်ကုန်မြို့တွင်း (၁၉) မြို့နယ်ကို (၁၅၀၀) ကျပ်ထည်းနဲ့ ပို့နိုင်ပါတယ်။ နယ်ကိုပို့ပို့ ရန်ကုန်မြို့တွင်းပဲပို့ပို့ လာယူခအခမဲ့နဲ့ အိမ်တိုင်ရာရောက် လာလည်းယူပေးဦးမှာပါ။ Tracking System လည်းရှိတာမို့လို့ ကိုယ့်ပစ္စည်း ဘယ်ရောက်နေပြီလဲ ဆိုတာကိုလည်း စောင့်ကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။
Page link > https://bit.ly/2TciShv
ကဲ..ဒါဆိုရင်တော့ ကိုယ့်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကို ဘယ် Delivery နဲ့ စိတ်ချလက်ချ ပို့ဆောင်လို့ ရမလဲဆိုတာ သိသွားလောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။
Aung Myo Hein4Jun, 2021